दस्तखतको नमूना पेश गर्न दलहरुलाई आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै दस्तखतको नमूना पेस गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको मनोनयनको औपचारिक पत्रमा प्रयोग गरिने हस्ताक्षरको नमूना माग गरेको हो ।
सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको सर्वोच्चको ठहर, १० अर्ब खर्च नगर्न आदेश
काठमाडौं । पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आफ्नो योग्यताका विषयमा गम्भीर आरोप लागेपछि दैनिक कामकाजबाट अलग हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहेको समयमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भने नियमित कामलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । पराजुलीले आज मुद्दाको पेशी तोक्दै आफू सम्मिलित दुई इजलास पनि गठन गनुभएको छ ।
तीन दिनभित्र राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने बताउनु भएको छ । कैलालीको गोदावरीमा बाह्र राशी मकर मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म दलीय सहमतिको प्रयास गर्दा प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका विना विभागीय मन्त्रीहरुले राजिनामा दिने
प्रधानमन्त्री देउवाले निवार्चन नगराउने खेल गरेको भन्दै निवार्चनको सुनिश्चितताका निम्ति सरकारमै रहने निर्णय गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न र प्रदेश सरकारको प्रक्रियाका लागि सहज होस् भन्दै राजीनामा दिन लागेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले यस विषयमा निकास दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ । वाम गठबन्धनका माओवादी र एमालेले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भन्दै त्यसमा बाधा नगर्ने बताइ सकेका छन् ।
डा गोविन्द केसीको निशानामा केपी ओली
अध्यक्ष ओलीले माफियाको संरक्षण गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीको २०२८ सालदेखिको सम्पूर्ण ट्र्याक रेकर्ड बमोजिम आन्दोलन सुरु गर्ने उहाँले चेताबनी दिनुभयो । उहाँले अब बन्ने सरकारलाई माइतीघरबाटै ढाल्ने समेत बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन तालिका आज सार्वजनिक गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तालिका आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको गृहकार्यमा जुटेको आयोगले आज तालिका प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको हो ।
डा. गोविन्द केसी विरुद्ध दायर अदालत अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस जारी, रिहाईको माग गर्दै समर्थकद्धारा माइतीघरमा प्रदर्शन
डा. गोविन्द केसी विरुद्ध दायर अदालत अवहेलना मुद्दामा बहस भइरहेको छ । प्रा. डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट र माफिया भएको बताउनु भएको छ ।
सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र अधिकार - अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ, २६ पुस । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनको विषय प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।